Ukuba "esimweni esithakazelisayo", owesifazane ufuna ukushintsha indlela yakhe yokuphila, okwenza kube lula futhi ephephile ngangokunokwenzeka.
Ngifuna ukudla kuphela ukudla okunempilo okukhethekile, ukubuka umbuso nomsebenzi wokuphumula, ukuzivocavoca nokuyeka yonke imikhuba emibi. Kodwa ngezinye izikhathi kuyadabukisa ukuhlukana nengubo yakho eyimpendulo eyintandokazi, ukuhlehliswa kwezimonyo ezikhanyayo kuze kube izikhathi ezingcono, ukhohlwa mayelana nokuhlolwa nge-hairdo okwesikhashana, futhi ushintshe izithende ezinhle kuma-sneakers ezemidlalo.
Abadwebi bezithombe, izazi zengqondo, abakhiqizi bezicathulo kanye nathi, abesifazane,
izintuthwane zothando eside, zibhekwa njengengxenye ebalulekile yokuphila kwethu. Kuzo zonke lezi zinwele zezinwele ezithandekayo esizizwa zihle kakhulu futhi zinhle, okungaqiniseki ukuthi zisinika ithemba futhi sizijabule.
Uma uhamba ngesithende, umthwalo ezinyaweni ukwanda izikhathi eziningana. Ukugqoka izicathulo ezinezithende eziphakeme, owesifazane akaqapheli ukuthi iphuzu lokusekela lishintsha, inyawo liphumula kuphela kulokhu, liyanciphisa kakhulu ukuzinza futhi libuthakathaka imigqa yezinyawo nezinyawo. Umthwalo owenziwe emgodleni ukwanda, isikhungo sokuvuthwa komzimba sithuthuka phambili, lo wesifazane uthambekele ekuthembekeni, ezama ukugcina ibhalansi. Ukuhlukana kwemisipha yemilenze, i-lumbar spine kanye nesifuba kukhula kakhulu. Ngenxa yalokho, izinhlungu ezibuhlungu zivela emisipha yemilenze, ukujikeleza kwegazi kuphazanyiswa, okuholela emithanjeni ye-varicose, izinyawo ezihamba phambili zikhula.
Emzimbeni wezinguquko ze-hormonal wesifazane okhulelwe ezenzekayo, okuholela ekuphumuzeni kwemigudu, okuba yinto ekhudlwana kakhulu. Ukwanda kwesisindo kubangela ukwanda komthwalo ezitsheni zemilenze, okuholela ekuthuthukiseni imivimbo ye-varicose. Ngaphezu kwalokho, isithende singabangela ezinye izinkinga ezinkulu.
Ukubeka izicathulo eziphakeme kakhulu, owesifazane okhulelwe engozini yokuthola ukuhlukaniswa, ukuwa nokuhamba kwe-vertebrae ngokunyakaza okungazelelwe, kungase kutholakale izimpande emilenzeni, e-edema nasebuhlungu obuphansi emuva. Ngenxa yokuthi isikhungo sokuvuthwa komzimba sishintsha phambili, ingane ingathatha indawo engafanele - i-transverse noma i-gluteal, engabangela ukulethwa kwesigaba sokugcina. Ukwehlukana okwenyuka emilenzeni, ukucindezeleka okwenyuka emajoyini we-hip kanye nomgogodla kungabangela ukwanda kwezwi lesisu, elibhekene nosongo lokukhulelwa kwesisu.
Ngakho iziphi izicathulo ezingcono kakhulu kwabesifazane abakhulelwe? Okokuqala, abesifazane abathintekayo kufanele babe nokunethezeka nokukhanya, okukhethiwe kunikezwa izicathulo ezenziwe ngezinto zemvelo, nezikhumba zesikhumba. Umama omuhle kakhulu ozayo uzozizwa ngezicathulo ezithambile, eziqinile futhi ezikhululekile ngaphandle kwezithende, noma ngesithende esincane. Izikebhe eziphindaphinda ukuma kwezinyawo zizokwesekela ukwesekwa okwengeziwe. Ngesikhathi sokukhulelwa, abesifazane bakhuthazwa ukuba bahambe ngaphezulu emoyeni futhi bahole impilo esebenzayo. Ukuze uhambe, ungakhetha ama-macas akhululekile noma amasinki anepulatifomu ephansi, futhi izicathulo ze-ballet ezifisa kakhulu kule nkathi nazo zizokulandela. Uma imilenze yomama esizayo ijwayele ukuvuvukala, khetha izicathulo ezizobe zikhululekile kuye. Odokotela batusa ukuthi bangagqoki izicathulo nezicathulo ngezinzwane ezincane, eziphazamisa izinzwane zenu, zivimbela ukujikeleza kwegazi, kungcono ukhethe izicathulo ezinezikwele zesikwele noma ezizungezile. Ukuchotshozwa, okutholakala ngezicathulo, ukuwela emilenzeni, ukucindezela izitsha, ukukhubaza, futhi kwezinye izimo kungabangela ukwanda kwe-edema. Kunconywa ukukhetha izicathulo ngezithende eziphansi, ezizinzile nezibanzi. Kungakhathaliseki ukuthi imisipha yangemuva ayifuni kahle, umama wesikhathi esizayo kufanele akhethe izicathulo ezikhululekile ngesithende esisezingeni eliphansi kuze kufike ku-3 cm. Izinyawo ezinjalo izicathulo azithokozi kakhulu ekukhatheni nase-edema, ingozi yokudoba umlenze noma ukukhubeka kunciphise kakhulu. Noma kunjalo, kufanele kukhunjulwe nokuthi izicathulo ezinyaweni zingaholela ekwandiseni okujulile kwezinyawo futhi ziholele ekuthuthukiseni izinyawo eziphansi. Ukuze ulondoloze unyawo futhi uvikele ngokumelene ne-deformation, kuyasiza ukufaka izicathulo izinsimbi ezikhethekile ezifakiwe. Ebusika, kubalulekile ukuthatha izicathulo ezifudumele ezenziwe ngoboya noma nge-suede, emhlabathini owodwa ovuthayo. Ehlobo, izicathulo zesikhumba ezikhululekile, ama-clogs aphansi noma izicathulo ze-ballet. Ukuze uthole ukuphumula ebhishi noma eduze nolwandle olufanelekayo ama-slippers noma ama-slates afanelekile.
Kodwa ingabe kufanelekile ukushiya isithende nhlobo, ukufaka esikhundleni sabo ngezemidlalo zemikhumbi noma ama-ballets amfashini? Futhi ukuthi ungaba kanjani, uma ufuna ngempela ukugqoka izithende zakho ozithandayo, lapho ukhulelwe kungabonakali? Ukuze unciphise ingozi ngokugqoka izithende, kwanele ukunamathela emithethweni eminingana. Ungagqoka izicathulo ezingekho ngaphezu kwamahora amabili, amahora amathathu. Njalo uzinike imilenze ukuphumula futhi uhlele i-gymnastics encane. Qinisekisa kahle umthamo wokunyathela izinyawo zakho, noma yiziphi izinto ezivela phansi, kuyasiza ukugoqa izinyawo zakho ibhola elincane, okuyi-massage enhle yezinyawo. Ukuze unciphise ukukhathala futhi uthuthukise ukujikeleza kwegazi, ishaja sokuhlukana siphelele, silele ezinyaweni ngezikhathi ezithile, lokhu kunomthelela ekuphumeni kwegazi okungcono, ukwehla ku-edema kanye nobunzima emithanjeni. Ukuguqula isithende nakho kungasebenza njengesikhulumi esincane.
Izindwangu zesifazane abathintekayo zingathengwa ezitolo zezinyawo ezivamile, namuhla imikhiqizo yezicathulo eziningi kakhulu, izicathulo ezifanele zitholakala kuzo zonke izinkathi. Abadwebi bezithombe kanye nabadizayizi bazama nokuthuthukisa izingubo ezithakazelisayo nezodwa kuphela, kodwa futhi zikhululekile futhi zikhululekile kunomama ozayo. Isibonelo, izicathulo zePiel, ezenzelwe umklami waseMelika uNicolas Veinograd, azifani nje kuphela ekuklanyeni okwesimidwebo, kodwa nangokududuza okukhulu. Ukukhetha izicathulo ezifanele futhi ezikhululekile ngesikhathi ukhulelwe kuzokunika umuzwa wokunethezeka nokududuza, futhi inhlalakahle kanye nomoya kubaluleke kakhulu ukugcina isikhathi eside kakhulu kunazo zonke izinyanga eziyisishiyagalolunye. Imfashini yesimanje inikeza izingubo ezihlukahlukene zokugqoka nezingubo ezinhle kwabesifazane abakhulelwe, okuvumela ukuba sihlale sihle futhi siyingqayizivele ezikhathini ezinhle kakhulu ekuphileni kwethu.
Umsoco olinganiselayo wezingane ezikhulelwe nezilahlayo
Izinkokhelo zengane yokuqala
Thenga i-playpen yintsana
Ukuphakamisa ama-mezonites: okuyinhloko yenqubo, ukuphikisana, imiphumela emibi
Umzimba omuhle wesiduna
Vula kusuka ku-turnip
Umngani kaVladimir Friske uzokufakazela ubuhlobo bakhe ngokuphathelene noPlato
Utamatisi olwandle oluhlaza oluhlaza
Ingane ayidli inyama nemifino